कोइराला परिवारबाट सभापतिमा शेखर कि शशांक ? - Jhilko
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आगामी १४ औं महाधिबेशनको पूर्व तयारीका लागि कोइराला परिवारका जेष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले देश दौडाहा अभियान सुरु गरेका छन् । २०७७ साल फागुन ७ देखि १० गतेसम्म राजधानी काठमाडौंमा १४ औं महाधिबशेन गर्ने निर्णय नेपाली कांग्रेसले गरे लगत्तै नेता कोइराला देश दौडाहामा निस्केका हुन् । तर, उनको यो देश दौडाहा आफै सभापति बन्नका लागि हो या भाइ डा. शशांक कोइरालालाई सभापति बनाउनका लागि हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई उमेदवार हुन नदिने अभियानको भने उनले हरेक सार्वजनिक मञ्चमा घोषणा गरेका छन् ।
गत साता प्रदेश १ मा आयोजित कार्यक्रममा नेता कोइरालाले नामै लिएर अब सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विश्राम लिनु पर्ने बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिलाई सभापति देउवाले खासै वास्ता नगरे पनि वरिष्ठ नेता पौडेलले भने धेरै नै चित्त दुखाए । समाचारस्रोतका अनुसार पौडेलले टेलिफोन नै गरेर डा. कोइरालालाई आफ्नो विरोध नगर्न अनुरोध गरेका थिए । तर गत शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा पनि डा. कोइरालाले देउवा र पौडेललाई एउटै घानमा हालेर आलोचना गरे । उनको भनाइ थियो– ‘म अब तपाईहरुलाई कुनै किसिमको अन्याय हुन दिन्न । राजनीति गर्ने व्यक्तिमा संस्कार र नैतिकता चाहिँदो रहेछ, पार्टीमा अहिले नैतिकताको ह्रास भइसकेको छ, अहिलेसम्म पार्टी नेतृत्वमा आएका ब्यक्तिले आफ्ना कालखण्ड बिताइसकेकोले अब नयाँ अनुहार पार्टी नेतृत्वमा आउनुपर्ने देखियो ।’
उनले अगाडि भने, ‘नैतिकताको त्यो लडाईका लागि म तपाईहरुको साथमा छु, नेपाली कांग्रेसलाई हामी पुरानो अवस्थामा फर्काउन सक्छौं, जबसम्म नैतिकतालाई माथि लैजान सक्दैनौं, तबसम्म नेपाली कांग्रेस कमजोर हुन्छ ।’
डा. शेखर कोइराला पौडेलसँग चिढिएको गत १३ औं महाधिबेशनदेखि नै हो । १३ औं महाधिबेशन हुनु भन्दा दुई वर्ष अघिदेखि पौडेल सभापति र डा. शेखर महामन्त्री पदमा चुनाव लड्ने गरी प्यानल सेट गरिएको थियो । शेखरले आफ्नै खर्चमा करिव दुई वर्ष जति पौडेललाई देश दौडाहा गराए, तर सुशील कोइरालाको निधनपछि पौडेल संस्थापन पक्षबाट सर्वसम्मत उमेदवार बन्ने कन्फर्म भयो तब उनले डा. शेखरलाई हुत्याएर डा. शशांक कोइरालालाई आफ्नो प्यानलमा पारे । यो घटना पनि डा. शेखरले धेरै नै चित्त दुखाए । भित्रभित्रै देउवालाई सहयोग गर्न थाले ।
देउवाले पनि डा. शेखरलाई चुनाव जितेपछि राम्रो अवसर दिने आश्वासन दिए । दुवै प्यानलबाट भोट पाएका कारण डा. शेखरले सबैभन्दा बढी मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्य पदमा चुनाव जिते । तर, महाधिबशेनपछि देउवाले खासै वास्ता गरेनन् । बरुपटक पटक भुक्याए । परराष्ट्र मन्त्री बनाउने देउवाको बचनपछि सपथ ग्रहणमा जान भन्दै दौरा सुरुवाल लगाएर बसेका शेखरलाई केही बेर पछि देउवाले फोन गर्दै भने– ‘सरी है, यसपटक सकिन अर्को लटमा गर्छु ।’ अर्को लटमा पनि देउवाले यसरी नै भुक्याए । त्यसपछि डा. शेखर देउवाको कट्टर विरोधी भएर निस्के । महाधिबशेनमा आफूलाई धोका दिएको भन्दै पौडेलले पनि वास्ता गरेनन् । त्यसपछि कोइराला परिवारको छुट्टै समूह बनाउन डा. शेखर वाध्य भए ।
जतिसुकै देश दौडाहामा लागे पनि भाइ डा. शशांक कोइरालाले सभापति पदमा उमेदवार हुने इच्छा व्यक्त गरे भने डा. शेखरपछि हट्न वाध्य हुनु पर्ने अवस्था छ । महामन्त्री समेत रहेका डा. शशांक कोइरालाले काम गर्न नसके पनि कसैलाई चिढ्याएका छैनन् । आफूले कुनै हालतमा जित्न नसक्ने अवस्था आयो भने सभापति देउवा स्वयम्ले महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई सभापति पदमा अघि सार्ने सम्भावना छ । आफ्नी श्रीमती आरुजु राणालाई पदाधिकारी बनाउने गरी देउवाले यो रणनीति अवलम्वन गर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै रहेको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
गत आमनिर्वाचनमा शशांक कोइरालाले जित्नु र शेखर कोइरालाले हार्नुले पनि नेपाली कांग्रेस पंक्तिमा पेचिलो सन्देश गएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा सवै वडा नेपाली कांग्रेसले जितेको मोरङको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा डा. शेखर कोइराला उमेदवार बनेका थिए । तर पराजीत भए । प्रदेशसभाका दुवै सिट कांग्रेसले जितेको यही निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै हो । प्रदेशसभाका दुवै सिट जितेको ठाउँमा प्रतिनिधि सभामा पराजित हुँदा शेखर कोइरालाको साख धेरै नै गि¥यो । यता स्थानीय निर्वाचनमा गैंडाकोट नगरपालिका लगायत धेरै पालिकाहरु एमाले र माओवादीले अलग अलग चुनाव लड्दा पनि जितेका थिए । तर, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले भने प्रतिनिधिसभामा राम्रै मत अन्तरले चुनाव जिते । जबकि शशांकको निर्वाचन क्षेत्रबाट कांग्रेसले प्रदेशसभामा एक सिट मात्रै जितेको थियो । यसै कारण पनि शेखर भन्दा शशांक लोकप्रिय रहेको बुझाइ कांग्रेस पंक्तिमा छ । –समयबद्ध साप्ताहिकबाट
घाइते हुनेमा बर्दियाका ३२ वर्षीय चन्द्रबहादुर चौधरी, ३५ वर्षीय सन्ते चौधरी र २६...